UserVoice: Nzaghachi, Arịrịọ Njirimara na ugchọpụta Nchọpụta Mere Mfe! | Martech Zone
Ndi akwukwo na Olu Ọrụ na-arụsi ọrụ ike na-arụ ma na-anwale ngwaọrụ ọhụrụ iji nyere gị aka itinye ndị ọrụ gị n'ọrụ, ka mma, nzaghachi data na-enye, ma nye nkwado dị mma karịa mgbe ọ bụla. N'ime ọnwa ole na ole gara aga, ha na-anwale ụfọdụ n'ime ngwaọrụ ndị a n'ime njikwa njikwa ndị ahịa 'UserVoice, gụnyere wijetị ọhụrụ na afọ ojuju na SmartVote, yana ụdị kọntaktị ọhụrụ dị mfe. Taa, ha na - eme ndi oru ohuru a onye obula!
Izute ọhụrụ, wijetị wijetị
Ngwaọrụ a echetaghachiri kpam kpam na-enye ahụmịhe zuru oke, na ngwa maka ndị ahịa gị iji nweta enyemaka ha chọrọ na maka gị iji (na-eme nke ọma) rịọ nzaghachi ịchọrọ. Ọ na-egosipụta SmartVote ™, Afọ ojuju afọ, yana azịza Azịza ka mma maka ụdị kọntaktị ahụ.
Nghọta ndị ọrụ
Nghọta ndị ọrụ na-enye gị ohere inweta nghọta karịa ndị ọrụ gị niile - ọ bụghị naanị ndị na-enye gị nzaghachi akọwapụtara ma ọ bụ nyefee tiketi. Akụkụ na ịkụ ala na njirimara njirimara ụfọdụ, gụnyere ụdị onye ọrụ, atụmatụ, ọkwa ọrụ, ọkwa afọ ojuju, nkwụghachi ụgwọ kwa ọnwa, uru ndụ, na ndị ọzọ.
Ọrụ afọ ojuju
Afọ ojuju na-enye gị ohere ịme usoro dị mfe ma mezie azịza ziri ezi ma ọ bụ na-adịghị mma na mpaghara ụfọdụ nke mmelite ngwaahịa. In-app kpaliri na-enye ọkwa nzaghachi dị elu karịa nyocha nke email ọdịnala ma nye gị ohere ịkọwapụta ROI nke nkwado dị ukwuu.
Dọrọ n'ime ngalaba ndị ọrụ akọwapụtara iji hụ etu afọ ojuju si agbanwe site na igwe mmadụ. Chọpụta ndị na - akwado gị ma gbochie ngwa ngwa tupu ọ mee. Gbaa ndị na-akwalite mgbasa ozi iji mgbasa ozi gbasaa ozi na tweets.
Nzaghachi onye ọrụ w / SmartVote ™
Nzaghachi beta nzaghachi onye ọrụ bụ ụzọ ọhụrụ, ụzọ awara data iji hazie, nyocha na gbakọọ stats na nzaghachi ezigara na akaụntụ gị. Ọ na - agwakọta data sitere na wijetị SmartVote new ọhụrụ yana data Insights data iji nyere gị aka ịchọpụta echiche ndị kachasị dị mkpa na ndị ọrụ dị iche iche.
Nke a gafere usoro ịtụ vootu ha ketara iji nye gị data ịchọrọ ịme mkpebi dị oke mma nke ga - ewe ngwaahịa gị (yana nọmba njigide) na ọkwa ọzọ.
SmartVote wijetị ọhụrụ na-eme ka ndị ọrụ bute ụzọ nke echiche dị ọkụ na nke echiche anaghị adị ma na-enye gị ohere ịpụta nsonaazụ ọnụọgụ. Nzacha ma dozie echiche gafee akaụntụ gị niile - ọ bụghị naanị n'ime otu ọgbakọ. Hazie njirimara na njirimara na njirimara akaụntụ.
Contactdị kọntaktị ọhụrụ maka ọnụ ụzọ weebụ gị
Mgbe itinye wijetị ọhụrụ na saịtị nke aka gị bụ nhọrọ zuru oke, izu na-abịa Olu Ọrụ ga-eji dochie kpochapụwo “Kpọtụrụ nkwado” ụdị na gị UserVoice web portal (subdomain.uservoice.com) na ọhụrụ Kpọtụrụ ngwaọrụ.
Ihe ọhụrụ ndị a dị ugbu a maka mmadụ niile Olu Ọrụ akaụntụ. Ọ bụrụ na ịnọ na nzaghachi-okenye naanị ma ọ bụ atụmatụ-helpdesk, UserVoice nwere ike inyere gị aka ịkwaga akaụntụ gị gaa na otu n'ime atụmatụ ọhụrụ ha ịmalite ịnụ ụtọ nke UserVoice niile. Iji wụnye wijetị ọhụrụ, gaa na ntọala akaụntụ gị ma ọ bụ gụọ gbasara ịtọlite ​​wijetị ọhụrụ.
Tags: nzaghachi ndị ahịaahịa nkwadonzaghachi onye ọrụechiche onye ọrụOlu Ọrụ
Jul 17, 2009 na 1:51 PM
Enwere m mmasị n'echiche gị nke iji sistemụ nsuso ahụhụ iji nọrọ na ndị gị na-eji koodu gị ma ọrụ olu onye ọrụ abụghị nhọrọ kachasị mma. Ọ ga-amasị m ịhụ otu ngwa mgbakwunye WordPress maka nsuso nsuso mana ahụbeghị m. Elere m ahụhụ anya site na ụmụ okorobịa na mozilla na m hụrụ ya n'anya, mana enweghị m ike ịwụnye ya ebe ọ bụ na enweghị m ohere ịnweta na akaụntụ nnabata m. Maka ugbu a, ana m anwale Mantis availabe na mantisbt.org, mana ejighị m n'aka maka ya ebe koodu ya siri ike ka m ghọta ma ya mere ọ na-esiri m ike ịgbanwe ya ma tinye isiokwu wdg. Ndo banyere ogologo oge m, nnukwu post . Luis
Jul 18, 2009 na 5:23 PM
Enwere ntọala ka mpaghara 'ahụhụ' dị na ala nke mpio nzaghachi na-egosi? Ọ naghị egosi na nke m, ọ dịkwa m ka m na-efu ihe doro anya na ha…
Jul 18, 2009 na 5:30 PM
Nevermind… Enwetara m ya. Enweghi m ike ịchọpụta otu - mgbe m gbakwunye echiche isiokwu ọhụrụ, ihe kpatara na ha anaghị egosi na mbido mbụ m, mgbe mhichapụ isiokwu ndabara…
Sep 19, 2013 na 1: 53 AM
Ezigbo, ekele maka ịkekọrịta…!